सुरु भयो नेपाल आईडल-२ को अडिसन, कहाँ-कहाँ र कहिले हुदैछ ? बिस्तृतमा हेर्नुस् (भिडियो सहित)::Leading Nepal News
देशका कुना कन्दरामा बसेरा आफ्नो गायन कलालाई तिखार्दै बसेकाहरुको लागि यो निकै ठूलो अवसर र स्थान बनेर आएको छ । पहिलो सिजनमा देशभरको ७ मुख्य सहरबाट उत्कृष्ट जादुमय स्वर भएकाहरूले मौका पाएका थिए भने दोश्रो सिजनमा देशभरका ६ शहरबाट जादुमय स्वरहरु छानिने छन् । यसको अडिसन कहा कहा र कहिले हुने बारे बिस्तृत जानकारी सहितको यो भिडियो हेर्नुस् ।
नेपाल आईडलको पहिलो सिजनले सुरुवात देखि, सुखद समापन समेत गर्न पाएको थिएन । अब दोस्रो सिजनले कस्तो उपलब्धि हासिल गर्ने हो भन्ने कुरा भने सबैमा खुल्दुली छ । आउदो चैतबाट अडिसन हुने दोश्रो सिजनमा तपाईको सहभागिता निकै उत्साहजनक हुनेछ । नेपाल आईडलको दोश्रो सिजनलाई पनि पछिल्लो समय निकै लोकप्रिय क्यामेरा फोन ओप्पोले नै मुख्य प्रायोजन गरेको छ । पहिलो सिजनमा पनि ओप्पो नै मुख्य प्रायोजक रहेको थियो । बिजेताले के पाउने भन्ने बिषयमा हाललाई खुलाईएको छैन ।
मिस वर्ल्ड २०१८ को उपाधि मेक्सिकोलार्इ !
थाइल्याण्डसँग पछि पर्दै शृङ्खला मिस वर्ल्डको टप १२ बाटै आउट !
मिस वर्ल्डमा यसरी अग्रता लिँदै नेपालकी शृंखला !
स्थानीय सरकारको तिहार नियमः रेकर्डेड गीत बजाउन प्रतिबन्ध !
टंक बुढाथोकीका दाई पहिलोपटक मिडियामा, कुकुरहरु भन्दै यसरी जंगिए (भिडियो सहित)
बलिउड हटमोडल पुनम पाण्डेय विश्वकप फाइनल हेर्न काठमाडौंमा ! (भिडियो सहित)
ज्योति मगरले ‘भर्जिन’ छु भन्दा सम्झनाले बुढाथोकी ले रोक्न सकिनन् हाँसो (भिडियो कुराकानी)
अमेरिका जानेभए अशोक दर्जी, बुबाआमा सहित अशोक काठमाडौं आउँनुको रहस्य यस्तो (भिडियो सहित)